Quotes Archives - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Gambaleelka, qoraagii, aqoonyahankii, halgamaagii, iyo aqoonyahanadii caanka ahaa ee caanka ahaa, waxay geeriyootay 15-kii December iyadoo 69 jir ah, waxayna wax-qabad la taaban karo ka geysatay dhinaca waxbarashada nabadda iyo caddaaladda, iyadoo qalinka ku duugtay buugaag iyo qormooyin kala duwan oo ku saabsan awoodda iyo dabeecadda barbaarinta wax ka beddeleysa dulmiga. [sii wad akhriska…]
"Waxaan si fudud isku deyeynay inaan beddelno habkii aan ugu socon jirnay nolol -maalmeedkeenna si qiimahayaga iyo caadooyinkeenna ahaanshaha ay uga tarjumaan ballanqaadkeenna xorriyadda." -jillaabyada gambaleelka [sii wad akhriska…]
"Sida waxbarashada labadaba ku saabsan iyo nabadda, nuxurka waxbarashada nabadda (hore, hadda, mustaqbalka) looma kala saari karo xaqiiqda bartaha." -Tony Jenkins [sii wad akhriska…]
“Waxbarashadu waa inay kobciso caqliga diidmada iyo iska caabinta rabshadaha noocyadeeda kala duwan. Waa inay kobciso dadka sida caqligalka ah u fahma ugana ogaanaya – maskaxdooda, qalbiyadooda, iyo jiritaankooda oo dhan – qiimaha aan la beddeli karin ee aadanaha iyo dunida dabiiciga ah. Waxaan aaminsanahay in waxbarashadan oo kale ay xambaarsan tahay halganka aan waqtiga lahayn ee ilbaxnimada aadanaha si loo abuuro waddo aan loo mari karin nabadda. ” - Daisaku Ikeda [sii wad akhriska…]
“Fikradda ah in adduun aan dagaal ka jirin si loo wada aqbalo, oo si miyir qab ah loo qaato iyadoo dagaal laga dhigayo mid sharci darro ah, hanaan waxbarasho ayaa looga baahan doonaa dhammaan heerarka: waxbarashada nabadda; waxbarashada dhalashada adduunka. ” - Abaalmarinta Nobel Peace Prize Sir Joseph Rotblat [sii wad akhriska…]
"Aragtida mustaqbalka ayaa muhiim u ah barista iyo barashada wax ku oolka ah ee waxbarashada nabadda." -David Hicks [sii wad akhriska…]